प्रधानमन्त्रीले गरे सातै मुख्य मन्त्रीसँग छलफल, के आयो निश्कर्ष ? | mulkhabar.com
प्रधानमन्त्रीले गरे सातै मुख्य मन्त्रीसँग छलफल, के आयो निश्कर्ष ?
March 22, 2018 | 6:40 am 185 Hits
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुले सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको लिखीत गुनासो नै गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सामूहिक छलफल गरेका हुन् । ओलीले सिंहदरबारमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश महान्यायाधीवक्तालाई डाकेर छलफल गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले काम नपाएको गुनासो आइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका कठीनाई, समस्या र केन्द्रले गर्नुपर्ने सहयोगमा विषयमा अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
काम नपाएकै कारण प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सांसद प्रदेश राजधानीमा भन्दा काठमाडौंमा बढी समय बिताउँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गाडीमा झण्डासमेत हाल्न पाएका छैनन् । कतिपय प्रदेश मन्त्रीलाई दिने गाडीसमेत दिइएको छैनन् ।
दिनभर भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई देशको विकास गर्दा विभिन्न बाहना देखाएर नपन्छिन आग्रह गरेका थिए । उनले संघीयताबाट पछाडि फर्कन नमिल्ने भएकाले जनउत्तरदायी भएर काम गर्न निर्देशन दिएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
के आयो निश्कर्ष ?